आदिल राशिद २ वर्षपछि फेरि टिममा फर्किए ! - Everest Dainik - News from Nepal
आदिल राशिद २ वर्षपछि फेरि टिममा फर्किए !
काठमाडौं, साउन ११ । टेस्ट क्रिकेटबाट सन्यास लिइसकेका इङ्ल्यान्डका लेग स्पिनर आदिल राशिद भारतविरूद्ध हुने पहिलो टेस्ट खेलमा पुनः टिममा समावेश भएका छन् । अगष्ट १ देखि ५ सम्म भारतविरुद्ध हुने टेस्ट खेलमा इंग्ल्याण्डले राशिदलाई खेलमा समावेश गरेको हो ।
इङ्ल्यान्डले भारतलाई उसैको मुख्य हतियार स्पिनबाट पराजित गर्न १३ सदस्यीय टोलीमा राशिदको नाम पनि समावेश गरेको छ। इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसिबी) ले विहिबार घोषणा गरेको पहिलो टेस्ट टोलीमा एसेक्सका तीब्र बलर जेमी पोर्टरलाई ‘डेव्यु’ को मौका दिन लागेको छ। २५ वर्षीय पोर्टरले ६१ प्रथम श्रेणी खेलेका छन्। २०१७ को काउन्टी च्याम्पियनसिपमा उनले ७५ विकेट लिएका थिए। उनलाई चोटग्रस्त क्रिस वोक्सको स्थानमा टिममा समावेश गरिएको हो।
ईसिबीले स्पिन आक्रमणलाई मजबुत बनाउन राशिदसँगै मोइन अलीलाई पनि समावेश गरेको छ। मोइनले २०१४ मा भारतविरूद्ध पहिलो शृंखलामा १९ विकेट लिएका थिए। उनले इङ्ल्यान्डबाट ५० टेस्ट खेलिसकेका छन्। एड स्मिथ ईसिबी खेलाडी छनोट समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि उनले २०१६ मा भारत भ्रमणपछि टेस्ट क्रिकेटबाट सन्यास लिएका राशिदलाई पुनः दुई वर्षपछि टोलीमा फर्काउने निर्णय गरेका हुन्।
यस्तो छ इङ्लिस टोली
जो रुट (कप्तान), मोइन अली, जेम्स एन्डर्सन, जोनी बेयरस्ट्रो (विकेटकिपर), स्टुअर्ट ब्रोड, जोस बटलर, एलेस्टर कुक, कुरेन, किटन जेनिङ्स, डेभिड मलान, जेमी पोर्टर, आदिल राशिद, बेन स्टोक्स। -एजेन्सी
ट्याग्स: Adil Rashid